Akụkọ - Otu esi emecha Ọganihu etemeete
Etu esi emecha Ọganihu etemeete
N'ihe banyere etemeete, ịkpụcha ihu gị kwesịrị ịbụ usoro azụmaahịa gị izizi tupu ị gaba n'ihu egbugbere ọnụ gị na etemeete anya gị. Mana ihe nwere ike ịdị mgbagwoju anya. Ichoro ihe eji acho ihe? Onye na-ezo ihe na-abịa tupu ma ọ bụ mgbe ntọala? Anyi no ebe a ka anyi wepu aka n ’usoro ihe anyi ji eme ihe site n’itinye etemeete ihu site na mbido rue na ngwụcha.
Ntụpụ ụkwụ 1: PRIMER
Iji primer bụ otu n’ime ihe kachasị mma ị ga - eme n’ihe gbasara itinye ihe ntecha. Primer nwere ike inyere gị etemeete na-eyi ndị ọzọ evenly ụbọchị. Họrọ primer nke nwere nchapụta ọkụ ma ọ bụrụ na ị nwere akpụkpọ akọrọ ma ọ bụ ihe mbido nke nwere ngwugwu matte ma ọ bụrụ na ị nwere mmanu mmanu. N'agbanyeghị ụdị nke ị họọrọ, tinye ya na ihu gị niile ma ọ bụ gaa na ebe ndị ezubere iche, dabere na nchegbu metụtara akpụkpọ gị.
Nzọụkwụ 2: Agba agba NKP .R.
Nwere ọchịchịrị gbara ọchịchịrị n’okpuru anya ma ọ bụ ọbara ọbara nke ị chọrọ izo? Ugbu a bụ oge iji jiri agba agba na-agbazi ihe mkpuchi iji kpuchie ihe ndị a. Naanị ngwakọta obere ihe na-eme ka agba na-agba agba na-abanye na mpaghara ezubere iche iji mkpịsị aka gị.
Nzọụkwụ 3: Ntọala
Ihu gi agaghi ezu oke ma o burughi obere ntọala! Enwere ọtụtụ ntọala dị iche iche ebe ahụ, ya mere họrọ nke dabara na mkpa gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nwere mmanu mmanu, ị nwere ike ịtụle iji ntọala matte (aka na-abụghị nke onwunwu). N'akụkụ aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị nwere akọrọ akpụkpọ, a radiant imecha ntọala, nwere ike ịbụ a mma nhọrọ maka gị.
Nzọụkwụ 4: BRONZER, BUSR,, NA / MA Ọ B HLA
Na-esote: Mee ka ọkụ gị ma ọ bụ mebie ụda rosy site n'itinye obere bronzer, blush and highlighter. Dika ihe nchara na ihe na-acha ọkụ na-aga, tinye ha na ebe anwụ ga-ada ihu gị (egedege ihu gị, imi, agba gị, na agba gị).